သင်၏အချက်အလက်မြင်ကွင်းကိုဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်ဖြင့်တိုးတက်အောင်လုပ်ပါ - EMD
မှတ်ချက်များကိုအဘယ်သူမျှမ sur Multi Display ကသင့်ရဲ့ data visualization ကိုဘယ်လိုတိုးတက်စေနိုင်သလဲ။Posted in, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်, လုပ်ငန်းဆိုင်းဘုတ် Par ပုတ်လိုက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ဇွန်လ 11, 2021 ဇွန်လ 18, 2021
ပထမ ဦး ဆုံး dashboard ဆိုတာဘာလဲ။
သင့်ရဲ့ data visualization ကိုပိုကောင်းအောင် dashboard ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်မလဲ။
အဆိုပါ software ကို
သတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းသည်အမြတ်အစွန်းအမြန်ဆုံးနှင့်ရေရှည်တိုးမြှင့်လိုသောကုမ္ပဏီများအတွက်အကြွင်းမဲ့ ဦး စားပေးဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ သို့သော်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှိရန်အရေးကြီးသည် ဒေတာ visualization မှန်ကန်စွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ရန်အတွက်။ ဒါကြောင့်ဒီဆောင်းပါးမှာမင်းတို့ဟာပေါင်းစပ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြေတစ်ခုရဲ့အစကိုပြောပြမယ် .ရာဝတီ နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်
ဒိုင်ခွက်သည်ကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်ကုမ္ပဏီ၏တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကိုမျှော်လင့်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီမန်နေဂျာသည်စျေးကွက်နှင့်အညီညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်နိုင်သည်။
တိကျစွာပြောရလျှင် dashboard သည်ကုမ္ပဏီ၏မဝေးတော့သည့်အနာဂတ်တွင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်ပြproblemsနာများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ပြည်တွင်းဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများသည်အပြောင်းအလဲများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်ခွင့်ပြုသည့်ခလုတ်ခုံအမျိုးအစားများရှိသည်။
- စစ်ဆင်ရေး dashboardရေတိုလုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်များကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက်အသုံးဝင်သည်။
- ဘဏ္ာရေးဆိုင်ရာဒိုင်ခွက်ကုမ္ပဏီ၏ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာခန့်မှန်းချက်ကိုနှိုင်းယှဉ်။ ၎င်းသည်အလယ်အလတ်ကာလအတွက်ရည်ရွယ်သည့်ခလုတ်ခုံတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းအပြိုင်အဆိုင်ဆက်နေရန်အချက်အလက် visualization သည်အရေးကြီးသည်။ ပိုကောင်းအောင်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး dashboard ကိုဖန်တီးရန် ဒေတာ visualization၊ မှန်ကန်တဲ့လူကိုသတင်းကောင်းရဖို့အခြေခံအဆင့်တချို့ကိုလိုက်နာဖို့အရေးကြီးတယ်။ သင်၏ dashboard ကိုဖန်တီးရန်အဆင့်ငါးဆင့်ကိုကြည့်ကြစို့။
တိုးတက်မှုနယ်ပယ်များကိုစဉ်းစားပါပထမ ဦး စွာသင်၏ကုမ္ပဏီကိုအနာဂတ်တွင်စီမံရန်အရေးကြီးသောကြောင့်ရည်မှန်းချက်များချမှတ်ရန်အရေးကြီးသည်။
5. ဒိုင်ခွက်ထုတ်လုပ်မှု: ဘယ်ဂရပ်များနှင့်ကိန်းဂဏန်းများကိုပြသရမည်နည်း။
သို့သော်ဤအရာသည်မလုံလောက်ပါ၊ တိုးတက်စေရန်အတွက်သင်၏ဒိုင်ခွက်ကိုပြသရန်သင်ပစ္စည်းကိရိယာများလိုအပ်သည် ဒေတာ visualization သင့်ကုမ္ပဏီ၏
ကွန်ပျူတာတစ်လုံး၊ မျက်နှာပြင်တစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက်ပိုပြီးနောက်ဆုံးတွင်အားကောင်းသော၊ သင်၏ကွန်ပျူတာသည်သင်၏ရှိသည့်မျက်နှာပြင်အရေအတွက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်သို့မဟုတ်သင်၏ dashboard ကိုထုတ်လွှင့်ရန်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ အမှန်စင်စစ်သင့်တွင်ဖန်သားပြင်များစွာရှိနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အပိုအရင်းအမြစ်များလိုအပ်သောကြောင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကွန်ပျူတာလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ dashboard မဖန်တီးမီသင့်လိုအပ်ချက်များကိုစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည်။ သငျသညျမျက်နှာပြင်တစ်ခုတည်းကိုသာအသုံးပြုလိုပါကသေးငယ်သောကွန်ပျူတာသည်လှည့်ကွက်ကိုလုပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဖန်သားပြင် ၄ ခုမှ ၆ ခုကြားတွင်အသုံးပြုလိုပါကသင့်တွင်ရုပ်မြင်သံကြားများကဲ့သို့ HDMI ပလပ်ဂင်များစွာပါ ၀ င်သောကွန်ပျူတာကိုလိုအပ်လိမ့်မည်။ သို့သော်၊ အကယ်၍ သင်သည်ရုပ်မြင်သံကြားအမြောက်အများကိုမရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုပါကအလွန်အမင်းတတ်နိုင်သောဖြေရှင်းနည်းများရှိနေသေးသည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲအကြောင်းသင်ပိုမိုသိလိုပါကမတွန့်ဆုတ်ပါနှင့် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည်! အကယ်၍ သင်သည် hardware များကိုတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူလိုပါကသင်ကဲ့သို့သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည် primeabgb.com.
သင်မျက်နှာပြင် ၆ ခုသို့မဟုတ် ၁ ခုသာအသုံးပြုလိုသည်ဖြစ်စေ၊ Easy Multi Display သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုကောင်းမွန်သောအချက်အလက်မြင်သာအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Easy Multi Display သည်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်အဘယ်ကြောင့် "ရှိရမည်" ဖြစ်သနည်း။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၄ င်းသည်ဖန်သားပြင် ၆ ခုနှင့်အရင်းအမြစ် ၂၄ ခု (မျက်နှာပြင်တစ်ခုစီအတွက်ရင်းမြစ် ၄ ခု) အထိထောက်ပံ့နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင့်တွင်မျက်နှာပြင်တစ်ခုသာရှိလျှင်ပင်ဓာတ်ပုံများ၊ Excel စာရွက်များ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ဆော့ဝဲလ်နှင့်အခြားအရာကဲ့သို့သောမီဒီယာရင်းမြစ် ၄ ခုအထိကိုပြသနိုင်သည်။
ထို့အပြင် Easy Multi Display သည် dashboard များအသုံးပြုလိုသည့်မည်သည့်ကုမ္ပဏီအတွက်မဆိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအင်္ဂါရပ်များစွာရှိသည်။ သင်၏ dashboard ကိုအဝေးမှထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ပိုမိုများပြားစေရန်သင်၏ display ကိုကြိုတင်စီစဉ်ရန်၊ သင်၏အသုံးပြုသူများကိုအခွင့်အရေးပေးရန်၊ အဝေးထိန်းခလုတ်ကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Easy Multi Display သည်အပြည့်စုံဆုံးဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်းအင်ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သော်လည်းစျေးကွက်တွင်အသက်သာဆုံးဖြစ်သည်။ နောက်တဖန်တွန့်ဆုတ်ခြင်းနှင့်ငါတို့စမ်းသပ် version ကို download လုပ်ပါ!